जहाजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमल पनि थिए? पाइलट शेर्पासँगको फोटो यसरी भयो भाइरल (भिडियो) – Online Khabar 24
जहाजमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र कोमल पनि थिए? पाइलट शेर्पासँगको फोटो यसरी भयो भाइरल (भिडियो)
September 29, 2021 by admin admin
फेसबुकको एउटा ग्रुपमा प्रेम कोइराला लेख्छन्,
‘काठमाडौंबाट विराटनगर उडेको बुद्ध एयरको जहाजमा सवार राजारानीसहित सम्पूर्णको जीवन सुरक्षित रह्यो, राजारानीसँगै रहेकाले प्रायः व्यक्तिहरूलाई ठुक्क थियो, जहाँ राजा छन्, त्यहाँ भगवान रहन्छन् ।
जय देश जय नरेश ।’तर, सोमबार साँझबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्वरानी कोमल शाह, बुद्ध एयरका क्याप्टेन आङगेलु शेर्पासहित बुद्ध एयरका कर्मचारीसहितको एउटा तस्वीर भाइरल भएको छ । के पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वरानी कोमल त्यो जहाजमा थिए ? फ्याक्ट चेक गरेपछि यस्तो भेटियो ।
मेरो जीवनको अन्तिम दिन आजै रहेछ भनेर आकाश बाटै घरमा SMS पठाउने यात्रुको दर्द’नाक का’हानी, “जहाजभित्र त्रा’स फै’लिसकेको थियो।
सबैजना रु’न थालिसकेका थिए। कतिले भगवान पुकारी रहेका थिए। काठमाडौं फर्किएपछि पनि ८/१० पटक प्रयास गर्नुभयो। जब मैले प्लेनबाट विमानस्थलभित्र नेपाली सेना, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स देखेँ यसपछि अब बाँ’च्दिन भन्ने लाग्यो।
यसपछि जीन्दगी यति नै रहेछ भन्ने लाग्यो। कतिले ढोका खोल्नुस हामी हाम फाल्छौं समेत भने तर एयरहोस्टेजले न’आँतिनुस्, सम्हालिनुस् सुरक्षित अवतरण हुन्छ, भनिरहेका थिए, एयरहोस्टेसको आँखामा आँ’सु थियो, तर हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यसपछि झन मनमा चिसो पस्यो। बाँ’चियो भने फेरी भेटौला भनेर घरमा म्यासेज टाइप गरेको थिए। धन्न सुरक्षित अवतरण भयो र बाँ’चियो।”
Prevदशैंको मुखमा काल बनेर आएको ट्रक’ले ज्या’न लियो आमा र छोराको , अधुरै रह्यो दशैंमा रमाइलो गर्ने
nextलोकसेवा तयारी गर्नेले जान्नै पर्ने यि कुरा हेर्नुस !